उपचार को प्रार्थना तपाइँको स्वास्थ्य लाई छिटो निको पार्न। ?
5 न्यूनतम पढाई
तपाईको स्वास्थ्यलाई छिटो निको पार्न प्रार्थनालाई तपाईको स्वास्थ्यमा सुधार गर्नुहोस्यो पुरुषको औषधि पूरक हुन आएको हो। प्रार्थना गरेर, तपाईंको आवश्यकता परमेश्वरको लागि अझ बलियो हुन्छ, जसले तपाईंलाई निको पार्ने उत्तम तरिका फेला पार्नुहुनेछ।
यो उपचार एक राम्रो डाक्टर को सन्दर्भ मा आउन सक्छ, उदाहरण को लागी। केहि अवस्थाहरूमा, यो नयाँ उपचार वा औषधि पत्ता लगाएर उत्पन्न हुन सक्छ। हिलिंग पनि एक चमत्कार मार्फत आउन सक्छ।
जे होस्, यो हुनको लागि, यो तपाईंको सम्पूर्ण शक्तिले निको पार्ने प्रार्थना गर्नु आवश्यक छ र विश्वासमा दृढ रहनु आवश्यक छ कि तपाईं यस अवस्थाबाट बाहिर निस्कन सक्नुहुन्छ। आशावाद कुनै पनि रोग बिरूद्ध सब भन्दा राम्रो हतियार हो।
1 तपाईको स्वास्थ्यलाई छिटो निको पार्न प्रार्थनालाई तपाईको स्वास्थ्यमा सुधार गर्नुहोस्
2 स्वास्थ्यको लागि प्रार्थना
3 रोग निको प्रार्थना
4 शक्तिशाली उपचार प्रार्थना
5 कसैको स्वास्थ्यको लागि प्रार्थना।
6 प्रधान दूत सेंट राफेललाई यो रोगको उपचार को लागी प्रार्थना गर्न
7 स्वास्थ्यको लागि सोध्नु हाम्रो फातिमा महिला को प्रार्थना।
8 निको पार्ने प्रार्थनाको महत्त्व
यद्यपि डाक्टरहरूले उपचारका साना सम्भाव्यताहरूको लागि आफ्नो आँखा खोलिसकेका छन्, भगवानका लागि कुनै पनि कुरा असम्भव छैन।
निको पार्ने प्रार्थनाको साथ तपाईं आफ्नो चमत्कार गर्न सक्नुहुन्छ र रोगबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ जसले तपाईंलाई यति धेरै दुःख दिन्छ।
भजन १ 133 र प्रधान दूत राफेलको प्रार्थनाको अतिरिक्त, जुन हामीले यहाँ यहाँ देखाइसकेका छौं, त्यहाँ अरू पनि छन् उपचार को शक्तिशाली प्रार्थना। तल हेर्नु।
स्वास्थ्यको लागि प्रार्थना
“प्रभु बुबा, तपाईं ईश्वरीय डाक्टर हुनुहुन्छ। जसले तपाईंलाई खोज्दछ उसलाई जीवन र जीवन दिनुहोस्।
यसैले आज, प्रभु, विशेष प्रकारले, म सबै किसिमका रोगहरूको उपचारको लागि सोध्न चाहन्छु, विशेष गरी ती मानिसहरू जुन मलाई यो समयमा कष्ट दिन्छन्।
मलाई थाहा छ तपाईं खराब हुनुहुन्न, तपाईं रोग चाहनुहुन्न कि स्वास्थ्यको अभाव हो, किनकि तपाईं सर्वोच्च हुनुहुन्छ।
मलाई गहिरो आध्यात्मिक उपचार र यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने, एक शारीरिक उपचार काम गर्नुहोस्।
यसलाई तपाईंको पवित्र आत्माको शक्तिशाली कार्यद्वारा वा डाक्टर र औषधिहरू मार्फत सिधा बनाउनुहोस्!
तपाईंको शक्ति, प्रभु, र प्रेममा मेरो विश्वास बढाउनुहोस् इन्फिनिटो त्यो मेरो लागि हो। हे प्रभु, मेरो विश्वास बढाउनुहोस् जुन कहिलेकाँही कमजोर छ।
म तपाईको हिलिंग पावरमा विश्वास गर्दछु, मेरा परमेश्वर, र तपाईले अहिले मेरो हृदय र शरीरमा गरिरहनु भएको सबै कामका लागि म नम्रतापूर्वक धन्यवाद दिन्छु। आमेन, त्यसो भए!
रोग निको प्रार्थना
“प्रभु, मलाई मेरो शरीरमा स्वास्थ्य दिनुहोस् र म तपाईंको सहयोगको योग्य हुन अनुशासित जीवनमा सहयोग गर्न सक्छु।
प्रभु, तपाईंलाई सम्मान र जानकारी दिन धन्यबाद र प्रशंसाको लागि, मलाई कत्ति धेरै समृद्ध बनाउनुहुन्छ, मलाई के चाहिन्छ याद नगरीकन, ठूलो सफलताको साथ मुकुटहरू जुन सँधै सजिलो हुँदैन।
जब म यस्तो दयाको लागि तपाईंको प्रशंसा गर्छु, प्रभु, म तपाईंलाई धन्यवाद दिन्छु शब्दहरूको साथ मात्र होइन तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ, पवित्र जीवनको साथ।
तिमी जसलाई आफूले माया गर्नेहरूलाई सजाय दिन्छौ, जसरी बाबुले बाबुलाई कत्ति मूल्यवान् ठान्छ सजाय दिनुहुन्छ, तर जब म तिमीहरुको हातले मलाई छोडीएको महसुस गरें म दुखी भएँ, तर सधैं दयाले भरिएको छ।
बुबा, मैले तपाईबाट कत्ति धेरै कुरा सिकेँ र सिकें!
तपाइँको प्रेमले केहि पनि मेल खाँदैन।
तिनीहरूको मार्गहरू धेरै यातनाका साथ रोपिएको छ, तर तिनीहरूमा हिंड्नेहरूले मात्र उनीहरूको अनौंठो आनन्द महसुस गर्न सक्दछन्। ”
शक्तिशाली उपचार प्रार्थना
“प्रभु येशू, मलाई लाग्छ कि तपाईं बौरिउठ्नुभयो र जीवित हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ तपाईं मेरो खुवाउन वेदीको संस्कारमा उपस्थित हुनुहुन्छ; मलाई लाग्छ कि तपाईले हृदयबाटै खोज्ने सबैको प्रार्थनाको उत्तर दिनुहोस्। म तपाईंलाई प्रेम गर्छु र तपाईंको प्रशंसा गर्छु। प्रभु, मानवलाई प्रेम गर्न आउनुभएकोमा म तपाईंलाई धन्यवाद दिन्छु।
कसैले तपाईलाई बिर्सेको छैन, तपाई मेरो जीवनको पूर्णता हुनुहुन्छ, तपाईका लागि हामीले क्षमा पाएका छौं, तपाईको सहयोगमा म शान्ति र स्वास्थ्यको भ्रमण गर्दछु। तपाईंको शक्ति संग मलाई नवीकरण गर्नुहोस्। मेरो आवश्यकतालाई आशिष् दिनुहोस् र ममाथि अनुकम्पा गर्नुहोस्।
हे प्रभु, मलाई निको पार्नुहोस्। मेरो आत्मालाई निको पार्नुहोस्, पापमाथि विजयी भएर। मेरो भावनाहरू निको पार्नुहोस्, मेरो घाउ, घृणा, निराशा वा चोटका कारण घाउहरू बन्द गर्नुहोस्।
मेरो शरीरलाई निको पार्छ, मलाई मेरो शारीरिक स्वास्थ्य दिँदै।
आज, प्रभु, म तपाईलाई मेरो पीडित रोगहरु समक्ष प्रस्तुत गर्दछु: (तपाईको रोग ठूलो स्वरमा भन्नुहोस्) र म तपाईलाई पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र हुन आग्रह गर्दछु, तपाईलाई खोज्नेहरु जस्तै तपाईले हाम्रो ग्रह पृथ्वीमा हुँदा।
म विश्वास गर्दछु कि वचनले प्रतिज्ञा गरेको छ: उहाँ आफैंले हाम्रा पापहरू हाम्रो शरीरमा रूखमा खसाल्नुभयो, ताकि हामी पापको निम्ति मर्न सकौं र जीवित रहन सक्छौं। न्याय; तिम्रो घाउले तिमीलाई निको पार्यो। '(१ Pdr २.२1)।
मँ तपाईप्रतिको प्रेममा मलाई विश्वास गर्दछु, र मेरो बिन्तीको परिणामबिना पनि, म विश्वासको साथ पुष्टि गर्दछु: प्रभु येशू, तपाईले ममाथि गर्नुहुने आशिष्को लागि धन्यबाद। "
कसैको स्वास्थ्यको लागि प्रार्थना।
"ब्रह्माण्डका भगवान, सबै कुराको सृष्टिकर्ता।
म यस समय तपाईंको सार्वभौम उपस्थितिमा आउँछु शारीरिक वा मानसिक विकारमा पीडित व्यक्तिहरूको सहयोगको लागि।
हामीलाई थाहा छ कि बिरामी अवस्थामा हामी प्रतिबिम्बका क्षणहरू लिन सक्दछौं, जसले हामीलाई ठूलो मन पराउँछन्, हामीलाई तपाईंको नजिक ल्याउँदछ, मौनताको मार्गहरूको माध्यमबाट।
तर हामी उसको कृपाको लागि अपील गर्छौं र उहाँलाई सोध्छौं: बिरामी परेको, पीडा, अनिश्चितता र सीमितता भएकाहरूलाई तपाईंको उज्जवल हात फैलाउनुहोस्।
विश्वास र विश्वास तपाइँको हृदय मा बलियो बनाउन दिनुहोस्। यसले उनीहरूको पीडा कम गर्दछ र शान्ति र शान्त दिन्छ।
तिनीहरूको शरीरहरू पुनर्स्थापना गर्न मद्दतको लागि तिनीहरूका प्राणहरूलाई निको पार्नुहोस्।
तिनीहरूलाई सान्त्वना, राहत दिनुहोस् र तिनीहरूको हृदयमा आशाको ज्योति खोल्नुहोस् ताकि आशा र विश्वासको समर्थनमा उनीहरूले ब्रह्माण्डको प्रेम महसुस गर्न सक्दछन्।
तपाईंको शान्ति हामी सबै संग हुन सक्छ।
प्रधान दूत सेंट राफेललाई यो रोगको उपचार को लागी प्रार्थना गर्न
«एस। राफेल, जसको नाम को अर्थ "भगवान को डाक्टर" हो, जसलाई युवा टोबियास को साथ मा मेडेस को देश को यात्रा मा संगै आरोप लगाइएको थियो, र जो फिर्ता आएर टोबियस का बुबाको अन्धापन निको भयो।
सेन्ट राफेल, तपाईं जसले टोबियसका बुबालाई उनको इच्छा र आकांक्षा पूरा गर्न मद्दत गर्नुभयो र मद्दत गर्नुभयो, हामी तपाईंलाई बिन्ती गर्दछौं र तपाईंको सहयोगको लागि सोध्छौं।
परमेश्वरसामु हाम्रो संरक्षक हुनुहोस्, किनकि तपाईं परोपकारी डाक्टर हुनुहुन्छ जसले आफ्ना विश्वासीहरूलाई पठाउनुहुन्छ।
एस राफेल, मलाई कुनै बिरामीको उपचार गर्नुहोस्।
मलाई सँधै स्वस्थ बनाउनुहोस्, किनकि हामी तपाईंलाई डन्डा गर्ने छैनौं। धन्यबाद
त्यसो होस्। "
हाम्रो बुबा, हेल मरियम र एउटा धर्मको प्रार्थना गर्नुहोस्।
स्वास्थ्यको लागि सोध्नु हाम्रो फातिमा महिला को प्रार्थना।
"फातिमाकी महिला, शरीर र आत्मामा कष्ट गर्ने सबैकी आमा मायालु।
तपाईंको बच्चाहरूको स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोस्, दुखाइ र पीडाबाट राहत पाउनुहोस् जसले हामीलाई दु: ख दिन्छ र असन्तुष्ट र कमजोर बनाउँदछ।
तपाईंको प्यारो छोरालाई सोध्नुहोस् जसले आफ्नो समयका धेरै रोगी मानिसहरूलाई निको पार्नुभएको छ, हामीमाथि अनुकम्पा राख्नुहोस्, हाम्रो बल बन्नुहोस्। हाम्रो कष्ट उहाँकै लागि होस्। एक-अर्काको हेरचाह गर्न परमेश्वरले हामीलाई उहाँको सेवा गर्न स्वास्थ्य दिऊन्। तर सबैभन्दा मुख्य कुरा यो हो कि परमेश्वर पिताको इच्छा पूरा होस्, जसले हामीलाई असीम प्रेम र अतुलनीय कोमलताका साथ हेरचाह गर्नुहुन्छ। हामीलाई हात दिनुहोस्, प्रिय आमा, र हामीलाई येशूमा लैजानुहोस्।
निको पार्ने प्रार्थनाको महत्त्व
जब हामी बिरामी हुन्छौं, शारीरिक, आध्यात्मिक वा मानसिक, हामी निराशाको सीमामा पर्छौं। स्वास्थ्य पीडाको साथ एक प्रियजन छ जब यो पीडा पनि हामीलाई हिट। ती क्षणहरूमा, हामीसँग कोही छ भन्ने थाहा पाएर हामीलाई आराम दिनुहोस्।
परमेश्वर आफ्ना छोराछोरीलाई कहिल्यै त्याग्नुहुन्न। त्यसकारण, को महत्त्व निको पार्ने प्रार्थना भनेको यसले हामीलाई सान्त्वना दिन्छ। यस प्रार्थनाले यी कठिन समयमा शान्त र आशा ल्याउँछ।
धेरै चोटि हामी भगवानको अगाडि आफैंलाई भेट्छौं कि कसरी हाम्रो उपचारको लागि, कसरी भाषा प्रयोग गर्ने भनेर सोध्नु पर्छ। निको पार्ने प्रार्थनाले सही शब्दहरू ल्याउँदछ जुन विश्वाससँग बोलेमा हामीलाई निको पार्ने ठूलो शक्ति हुनेछ।
स्वास्थ्यलाई छिटो निको पार्नको लागी उपचारको प्रार्थनामा डुबेको रमाईलो मान्नुहोस् र अवस्थित सबै तेस्रो प्रकारका बारे बढि जान्नुहोस्।
अनुग्रह प्राप्त गर्न र तपाईंको गहिरा चाहनाहरू पूरा गर्न शक्तिशाली प्रार्थनाहरू
एक आत्मीय साथी फेला पार्न र एक प्रेम कथा बाँच्नको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्
आध्यात्मिक क्षमाको प्रार्थना सिक्नुहोस्